ओमिक्रोन भेरियन्ट समुदायमा: यस्ता छन् जान्नै पर्ने १४ कुरा संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गर्दा गम्भीर लक्षणका बिरामीको संख्या पनि बढ्दै जान्छ जसले गर्दा स्वास्थ्य संस्थानमा चाप बढ्ने हुन्छ। बुधबार, पुस २८, २०७८
बालबालिकामा हुने मधुमेहः यी तीनवटा ‘डी’मा ध्यान दिन जरुरी बालबालिकामा हुने मधुमेह वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको छ। यो रोगबाट अभिभावक तथा आफन्तहरु डर त्रासले आक्रान्त भएको पाइन्छ। यो रोगको कारणले गर्दा बालबालिको शरीरमा इन्सुलिन भन्ने हर्मोन बन्न सक्दैन र शरीरमा इन्सुलिन हर्मोनको कमी हुन्छ। शनिबार, पुस २४, २०७८
आँँखा वरिपरि ‘डार्क सर्कल’ छ? यी खानेकुरा खानुहोस् बढी काम गर्ने, तनाव लिने, पर्याप्त नसुत्नेलगायत कारणले आँखावरिपरि ‘डार्क सर्कल’ देखापर्ने गर्छ। यसले मानिसको समग्र सुन्दरतामै ह्रास ल्याउँछ। डार्क सर्कल हटाउन यी भिटामिन पाइने खानेकुरा खानुपर्छः आइतबार, पुस ११, २०७८
वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्यमा हुने ८ असर र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपायहरु कुनैपनि हानिकारक रसायनिक, भौतिक वा जैविक तत्वहरु वायुमण्डलमा मिसियो भने यसलाई वायु प्रदूषण भनिन्छ। वायु प्रदूषणको कारणले मानिसलाई मात्र नभएर अन्य जीवजन्तुहरु साथै पर्यावरणलाई पनि असर पुर्‍याइ रहेको हुन्छ। बुधबार, पुस ७, २०७८
भातको माड यति धेरै उपयोगी! हामीले पकाउने भात आधा पाकिसकेपछि तयार हुने बाक्लो तरल पदार्थलाई भातको माड भनिन्छ। कान्जी समेत भनिने यो भातपानी स्वास्थ्यका दृष्टिले धेरै हितकर छ। छालाको समस्यादेखि स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य समस्याको समाधानको लागि भातको माड (भात पानी) प्रभावकारी मानिन्छ। शनिबार, पुस ३, २०७८
गर्भवती अवस्थामा खानाकाे ख्याल कसरी राख्ने गर्भवती सुरु भएपछि शरीरमा हर्मोनको मात्रा तिव्र हुने भएकाले हर्मोनमा असन्तुलन देखिन थाल्दछ। फलस्वरुप पाचन प्रक्रियामा सुस्तपन आउने, पित्त बढ्ने जस्ता कारणले गर्दा वाक वाकी लाग्ने, घाँटी पोल्ने, बिहानी पख खाली पेटमा बढी समस्या देखिने हुन्छ। मंगलबार, मंसिर २८, २०७८
खानामा फाइबर बढाउने उपाय अन्नको पुरै भाग (मकै,गहुँ, जौँ, फापर, कोदो), गेडागुडी (चना, गेडागुडी,मस्याङ), सागपात, फलफूल आदिमा फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। आइतबार, मंसिर २६, २०७८
यसरी घटाउन सकिन्छ तौल मोटो भयो भन्दैमा खाना खानै छोड्नु बानी गर्नुहुँदैन। विशेषगरी,दैनिक तीन पटक सन्तुलित खाना खानुपर्दछ। हरेक खाद्य समुहबाट आवश्यक परिणाममा पोषिलो खाद्यपदार्थ छनोट गर्नुपर्छ। शनिबार, मंसिर २५, २०७८
योग र खानाको सम्बन्ध योगको साथ साथै यसमा निर्दिष्ट खाना सम्बन्धी तौरतरिकालाई अवलम्बन गर्न सकेमा अवश्य पनि योगबाट हुने फाइदा पाउन सकिन्छ। शनिबार, मंसिर २५, २०७८
शारीरिक कसरत गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु तनाव र व्यस्तता, नियमित शारीरिक कसरतको अभाव, अस्वस्थकर खानेकुरा र निस्क्रिय जीवनशैलीलले मानिसहरुमा विभिन्न किसिमका रोग लाग्न सक्ने खतरालाई बढाएको छ। जसले गर्दा नसर्ने रोगहरुको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। शनिबार, मंसिर २५, २०७८
बालबालिकामा देखिएकाे हात, पैताला तथा मुखकाे राेग के हाे, कसरी सर्छ? बिरामी बच्चाको सिँगान, र्याल खकार साथै फोकाको पिपबाट यो रोग सर्न सक्छ। शुक्रबार, मंसिर २४, २०७८
जाडोमा ‌ओठ फुट्नबाट जोगाउने ५ उपाय फुटेको ओठमा मृत छालाका पत्र हुन्छन्, जसले तपाईंलाई अस्वस्थ र अनाकर्षक देखाउन सक्छ। यसका लागि स्क्रब प्रयोग गरेर यस्ता मृत छाला हटाउनुपर्छ। सोमबार, मंसिर २०, २०७८
जाडोमा स्वस्थ रहने ११ तरिका बिहान सामान्य व्यायाम गर्ने, हिँडडुल गर्ने, फुर्सदको समयमा करेसाबारीमा आफूलाई व्यस्त राख्ने आदि काम गरेमा शरीरलाई आवश्यक ताप र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। जसले गर्दा रुघाखोकीजस्ता रोग लाग्ने जोखिम घट्छ। शनिबार, मंसिर ११, २०७८
श्वासनलीको संक्रमण के हो र कसरी जोगिने? नाक, मुख, घाँटी वा फोक्सोमा हुने कुनैपनि किसिमको संक्रमणलाई श्वासप्रश्वास नलीको संक्रमण भनिन्छ। साधारणतया यस्तो संक्रमण जीवाणुको कारणले हुन्छ तर वीषाणुको कारणले पनि हुन सक्छ। मंगलबार, मंसिर ७, २०७८
डेंगुबाट सुरक्षित रहने १० उपाय ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, आँखाको गेडी दुख्नु, शरीरमा स–साना थोप्ला जस्तो बिबिरा देखिनु र मांसपेशी तथा जोर्शी दुख्नु यसका लक्षणहरु हुन्। मंगलबार, कात्तिक ३०, २०७८
मिर्गौला फेल र उपचारात्मक विकल्पको रुपमा पेरिटोनियल डायलाइसिस मिर्गौलाले २४सै घण्टा रगत सफा गर्नको लागी एक सफाइ मेसिन जस्तै काम गर्दछ। मिर्गौला भित्र लाखौंको संख्यामा नेफ्रोन भनिने फिल्टर कोषहरू हुन्छन् जसले एक दिन भरीमा करिब २ सय लिटर रगत फिल्टर गर्ने क्षमता राख्दछन्। मंगलबार, कात्तिक ३०, २०७८
जाडोमा गरिने यी ७ गल्ती, जसले निम्त्याउँछ स्वास्थ्यमा समस्या कुनै निश्चित वातावरणसँग छिट्टै घुलमिल हुनुको साटो जाडोका कारण अधिकांश समय अल्छी बन्छौँ। जसका कारण हामीले जानीनजानी विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्त्याएका हुन्छौँ। शनिबार, कात्तिक २७, २०७८
मृत्युअघि मान्छेको शरीरमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ? जब मृत्यु एकदम नजिक आउँछ उनीहरु पहिल्यैकै लक्षण देखाउन सुरु गर्छन्। श्वास प्रश्वास निकै अनियमित र सुस्त हुन्छ। केही सेकेन्ड श्वास रोकिन्छ। फेरी छिटो–छिटो श्वास फेर्छन। श्वास पक्रिया ढिलो छिटो, ढिलो छिटो भइरहन्छ। शनिबार, कात्तिक २७, २०७८
कस्तो बच्चाहरुलाई निमोनिया हुने जोखिम बढी हुन्छ? निमोनिया भएका बच्चाहरुमा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु जस्तै झाडापखला, दादुरा, औलो, कुपोषण समेत देखा पर्न सक्छ। यदि बच्चामा माथिको चिन्ह वा लक्षणहरु देखा परेमा तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु पर्दछ। शुक्रबार, कात्तिक २६, २०७८
यी हुन् जिब्रो सफा राख्ने ८ तरिका हामी दिनहुँ दाँत माझ्छौँ। जिब्रोको सफाइमा भने उति ध्यान पुर्‍याइरहेका हुँदैनौँ। जिब्रोमा जम्मा हुने सेतो पत्रले सास गनाउने समस्या उत्पन्न गराउँछ। साथै, स्वाद थाहा पाउन, शुद्धसँग उच्चारण गर्नसमेत यसको सफाइमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। मंगलबार, कात्तिक २३, २०७८
यस्ता लक्षण देखिएमा थाइराइड जाँच गर्नुपर्छ मधुमेह भएका बिरामीले वर्षको एकपटक थाइराइडको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। कहिले काहिं हाइपर थाइराइडिज्म्मा मधुमेह रोग पनि देखिन सक्छ। यसमा थाइराइड निको हुनासाथ मधुमेह पनि आफै निको भएर जान्छ। सोमबार, कात्तिक २२, २०७८
बेलुकाको खाना चाँडै खानुपर्ने ८ कारण हल्का महसूस हुन्छ: यदि बेलुकाको खाना सही समयमा खाइन्छ भने अर्को दिन भोक लाग्छ र समयमै तपाईंले खाना खानुहुन्छ। रुटीनमा खाना खानाले पेट हल्का हुन्छ र ग्यासको समस्या पनि हुँदैंन। आइतबार, कात्तिक २१, २०७८
यस्ता छन् अत्यधिक गुलियो खाँदा हुने ६ हानी तिहारमा अत्याधिक गुलियो राखिएका परिकार खाने प्रचलन छ। पछिल्लो समयमा तिहारमा पकाइने परिकारमा कृतिम गुलियो राखिने भएकाले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। अत्याधिक गुलियोले गर्ने हानी यसप्रकार छन्। शनिबार, कात्तिक २०, २०७८
तिहारको भाइमसला: के खाँदा के फाइदा? फ्ना दाजु–भाइको दीर्घ आयुका लागि दिदी–बहिनीहरुले स्वास्थ्यलाई बढीभन्दा बढी फाइदा पुर्‍याउने सुख्खा फलहरु किनेर दिन चिकित्सकको सुझाव छ। शनिबार, कात्तिक २०, २०७८
तिहारमा कसरी स्वस्थ रहने? यस्ता छन् १४ टिप्स तिहारमा गुलियो र चिल्ला परिकारहरु खाने गरिन्छ जुन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। तर होस् पुर्याइएन भने यसले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनगिन्ति समस्या निम्त्याउँछ। शुक्रबार, कात्तिक १९, २०७८
कोरोनाको जस्तै लक्षण भएको मौसमी फ्लूबाट कसरी बच्ने? यस्ता छन् ११ उपाय वर्षायाम सकिएर हिउँद सुरु हुन लागेसँगै मौसमी फ्लूका बिरामी बढ्दै गएका छन्। कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको फ्लू लागे शारीरिक र मानसिक रुपमा निकै कमजोर भइन्छ। बुधबार, कात्तिक १७, २०७८
स्ट्रोक के हो, किन हुन्छ र यसबाट कसरी बच्ने? दिमागमा रगत सञ्चालनमा कमी आउनु वा नशा फुट्नु दुवै कन्डिसनमा स्ट्रोक भएको मान्न सकिन्छ। यदि दिमागकोे नशामा रगत सञ्चालनमा कमी आयो भने दिमागको जुन भागमा रगत सञ्चालन कमी भएको हो त्यो भागले अक्सिजन पाउँदैन र अक्सिजन नपुगेपछि त्यो कोषले काम गर्न सक्दैन, त्यसपछि स्ट्रोक हुन्छ। शुक्रबार, कात्तिक १२, २०७८
महामारीको बेलामा किशोरकिशोरीले मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा विद्यालय र कलेज कहिले खुल्ने कहिले बन्द हुने हुँदा, सामाजिक कार्यक्रमहरु कम हुँदा र दिनदिनै भेट हुने, गफगाफ गर्ने साथीसँग छुट्दा, उसै त गाह्रो किशोरावस्थाको समयमा झनै अप्ठ्यारो थपिएको हुनसक्छ। बुधबार, कात्तिक १०, २०७८
स्तन क्यान्सरसँग सम्बन्धित ३३ जिज्ञासा र उत्तर स्तन क्यान्सरको पहिचान, उपचार र रोकथाम सम्बन्धि जनचेतना बढाउने उद्देश्यले नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको छ। यस लेखमा स्तन क्यान्सर सम्बन्धि केही तथ्य तथा नेपालमा स्तन क्यान्सरबाट बच्न बचाउन के गरिएको छ भन्ने कुरा समेटिएको छ। मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८
पाठेघरको मुखको क्यान्सरका लक्षण र बच्ने उपाय रोगको प्रारम्भिक चरणमा यसका लक्षणहरु खासै देखिदैनन्। जब लक्षणहरु देखिन थाल्दछन् तब क्यान्सरले दीर्घ अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। सोमबार, कात्तिक ८, २०७८